ओमिक्रोन संक्रमितमा देखिए यस्ता २० लक्षण, कति दिन रहन्छ शरीरमा भाइरसको असर ? | Ratopati
विश्वभर कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले महामारीको रुप लिइसकेको छ । विश्वभर धेरैजसो व्यक्तिहरु ओमिक्रोन भेरियन्टले आक्रान्त परेका छन् । ओमिक्रोनको लक्षणहरुमा विभिन्न प्रकारका परिवर्तन देखिइरहेका छन् । फरक–फरक व्यक्तिमा ओमिक्रोनको लक्षण पनि फरक नै देखिएका छन् । बेलायतको जेड्वोईले कोभिडको विषयमा गरेको अध्ययनले ओमिक्रोनको सबै २० वटा लक्षणहरुको बारेमा जानकारी दिएको छ । ओमिक्रोनका संक्रमितहरुमा यस्ता लक्षणहरु देखिएका छन् ।
२. नाकबाट सिँगान बग्ने
५.घाँटी खसखस गर्नु
६. लगातार खोकी लाग्नु
८. चिसो लाग्नु वा शरीरमा कम्पन हुनु
१०. रिँगटा लाग्नु
११. बास्ना नआउनु
१२. ब्रेन फग
१३. आँखा दुख्नु
१४. मांसपेशी दुख्नु
१५. भोक नलाग्नु
१७. ग्रन्थीहरु सुन्निनु
१९. स्वाद नआउनु
२०.छालामा र्याशेज आउनु
कहिलेसम्म रहन्छ यस्तो लक्षण
स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार ओमिक्रोनका लक्षणहरु डेल्टाको तुलनामा तीव्र गतिमा देखिन्छ । यसको इनक्युबेशन पीरियड पनि कम हुन्छ । संक्रमित भएको २ देखि ५ दिनमा नै लक्षणहरु देखिन्छन् । ब्रिटिश एपिडेमोलोजिस्ट टिम स्पेक्टरका अनुसार सामान्यतयाः रुघाखोकी जस्ता लक्षणहरु ओमिक्रोनको संक्रमण हुँदा पनि देखिन्छ । सामान्यतयाः ५ दिनसम्म भाइरस रहन्छ । सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजर र कोरोना रोकथामका लागि विशेष ध्यान दिएमा आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । टिम स्पेक्टरका अनुसार डेल्टाको तुलनामा ओमिक्रोनको लक्षणहरु केही दिनसम्म मात्रै रहन्छ । यो भाइरसको लक्षण केही दिन मात्र देखिन्छ । ५ दिनमा नै परीक्षण नेगेटिभ आउँछ । धेरैजसो ३ देखि ५ दिनमा नै यो भाइरस कमजोर हुँदै जान्छ ।